Ikhaya AMAZIKO E-EUROPEAN FOOTBALL Abadlali bebhola baseFrance Zonke i-Allan Saint-Maximin Ibali lokuKhula kobuntwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo le-Football Genius ngegama lesidlaliso "Ingcwele kaMax". Ibali lethu leNqaku laBantwana ebuntwaneni kunye ne-Untold Biography Facts ikulethela iakhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawuleyo ukususela ngexesha lakhe lobuntwana ukuza kuthi ga ngoku.
Ubomi kunye nokuvuka kuka-Allan Saint-Maximin. IiCredits Zemifanekiso: ChronicleLive, 90Min, Twitter kunye neGetFootballNewsFrance
Ewe, wonke umntu uyazi ukuba i-Saint-Maximin yinto eyahlukileyo, I-jack ebhokisini enesantya, ubuchule kunye namaqhinga enkundleni ebaleni abanomdla abalandeli bebhola. Nangona kunjalo, bambalwa kuphela abajonga i-Biology ka-Allan Saint-Maximin's enomdla kakhulu. Ngoku ngaphandle kokudibanisa okunye, masiqalise.
Iinqaku le-Allan Saint-Maximin Ibali lokuKhula kobuntwana kunye ne-Untold Biography Facts - Imvelaphi yoSapho kunye noBomi baKudala
Ukuqala, amagama akhe agcwele Allan Irénée Saint-Maximin. Wazalwa ngomhla we-12th ka-Matshi 1997 kunina, uNadège Saint-Maximin, noyise u-Alex Saint-Maximin eChâtenay-Malabry, umhlali kwilali ekumazantsi-ntshona eParis, eFrance.
Njengabantakwabo; UTomas Lemar, Thierry Henry, Dimitri Payet kwaye Kingsley Coman, Indoda yase-France yeyakhe Iqela laseFrance laseGuianese eCreole kunye neCarribean kunye neengcambu zentsapho yaseMelika esezantsi. Nangona wazalelwa eFransi, uSanta-Maximin unosapho oluvela kwilizwe laseGuyana (icala likanina) kunye noGuadeloupe (icala likayise).
Ukuzalelwa kubazali abazizityebi kunike uSanta-Maximin isiqalo esihle sobomi. Ukhulele kwintsapho ekumgangatho ophakamileyo kwaye wayehlala kamnandi njengomntwana. Ngabazali baka-Allan Saint-Maximin abanesona sifundo sibalaseleyo semali kwaye abakaze babhekane nengxaki yemali. Ubusazi?… Umama wakhe wayekade ebambe isikhundla sika 'umlawuli wezemfundo'kwisikolo esithandwayo esiseParis Suburbs ngelixa utata wakhe uAlex esebenza njengomlawuli weofisi kwiYunivesithi yaseParis Diderot eseParis, eFrance. Bobabini abazali bakhulisa abantwana babo ukuze babambelele kwinkolo yamaKristu.
Iminyaka Yokuqala: U-Allan Saint-Maximin wakhuliswa njengomncinci kubantwana abathathu. Unomntakwabo omdala ogama linguKurtys kunye nodade ogama lakhe lingaziwa ngexesha lokubhala. Ukukhula kwisixeko saseMeudon, uSanta-Maximin oselula waqala ukudanisa kunye nefashoni njengezinto zokuzonwabisa. Le ndlela yefashoni ebomini yambona ethatha ukufana kwangoko kweebhanti zentloko, ukukhula okuqhubekayo ukuza kuthi ga ngoku.
Uthando luka-Allan Saint-Maximin lweebhendi zentloko aluyonto intsha. Ifoto yakhe yobuntwana ithi konke. Ityala: IDailyMail
Iinqaku le-Allan Saint-Maximin Ibali lokuKhula kobuntwana kunye ne-Untold Biography Facts - Imfundo kunye neBraduer Buildup
Abazali baka-Saint-Maximin kunye nootitshalakazi besikolo bamnika zonke iinqobo ezifunekayo ukumenza agqithe ngelixa bekhula. Emva ngelo xesha njengomntwana wesikolo omncinci, uAllan wayenikwa ii-10 euros ngumama wakhe rhoqo xa esiya ekhaya esiya esikolweni. Uchithe imali ethenga iipipi kwaye exhasa abahlobo bakhe abasweleyo (Umqondiso wokupha kwakhe kwangoko). Xa ndandisesesikolweni, italente kaSanta-Maximin kwezemidlalo kunye nebhola yafunyanwa kwaye yaqhubeka ikhutshelwa ngaphandle komqeqeshi okanye umcebisi. Ukuthetha ngaloo nto, wakhe wathi;
“Italente yam yeza kum ngokwam. Ndithathe ibhola yonke indawo, esikolweni, ekhaya, njl njl. Ndadlala ibhola ngalo lonke ixesha nangona ndingaqeqeshiwe. Le yayiyindlela yam, ngendlela endiyifunayo. Isantya sam kunye nobuchule bam bezifundisiwe ”
Kuzo zonke izinto ezinokukhethwa kwezemidlalo, yayiyembaleki eyaqala yabulela kubuhlalu bayo bendalo ngokubaleka oko ibisengumntwana. Emva kwexesha elithile, wafaka i-Athletics kwiBhola kwaye waqala ukudlala umdlalo kunye nomntakwabo omkhulu, uKurtys ngelo xesha owayefuna ukuba ngumdlali webhola. Kwangoko, uSanta-Maximin wathembela kubuchule bakhe, uphuhliso olwamenza ukuba akholelwe ukuba wayenetalente yokuya kubuchwephesha.
Ukumaka ecaleni komntakwabo, injongo yokuqala kaSanta-Maximin yaba kukuba afunde ukwenza izinto ezingaqhelekanga ngebhola yebhola. Uyenzile yonke loo nto egameni lokuma ngaphandle kwesihlwele samakhwenkwe kwindawo ahlala kuyo- indawo apho amathuba ebhola ebekelwe umda. Imini yonke ngaphandle, indoda yase-French yaqala ukuhlonipha izakhono zayo kwikhonkrithi kunye nengca. U-Saint-Maximin wadlala namakhwenkwe akujikeleza iminyaka yomntakwabo (iminyaka emibini okanye emithathu ngaphezulu kwakhe).
Isantya esingaqhelekanga sika-Saint-Maximin xa sidityaniswa nobuchule bokuqhuba sambona egqwesa ngaphezulu kunabanye abafana elumelwaneni. Umdlali webhola osesitalatweni owayengafundiswanga waba nethamsanqa lokufumana ithuba lovavanyo kunye neVerrières-le-Buisson, iklabhu yasekhaya- 34 min ukuqhuba kunye ne-10.8km usapho lakhe. Ngelo xesha bobabini abazalwana (uKurtys engowokuqala) uzuze ngempumelelo yokwamkelwa kunye I-academy, ulonwabo lwe I-Saint-Maximin's amalungu osapho okunene ayengenamida.
Iinqaku le-Allan Saint-Maximin Ibali lokuKhula kobuntwana kunye ne-Untold Biography Facts - Ubomi bokuqala
Njengomncinci, uSanta-Maximin wafunda urhwebo kwiiklabhu zolutsha iVerriere-le-Buisson kwiinyanga ezimbalwa ngaphambi kokuba athuthuke kwenye iklabhu, i-Ris-Orangis yase-US eyayiqhubela phambili. 55 min ukuqhuba / (i-34.5 km) usuka ekhaya usapho eMeudon. Kwiklabhu, wagcinwa ngabahlohli bobabini, UJean-Louis Lessard kwaye I-Didier Demonchy. U-Saint-Maximin wadlala phantsi kwe-tutelage katitshala wakhe u-Frédéric Ferreira ngexesha lakhe le-3 spell.
Njengoko uninzi beluya kulindela, wayenesiqalo esihle kwimpumelelo yakhe. U-Saint-Maximin wayechwayitisa ukubukela ngenxa yokubonisa kwakhe rhoqo isantya kunye nezakhono. Oku kwa kumbona esenza inkqubela phambili kwiziko leFrentshi elinenjongo ezininzi i-ACBB (I-Athletic Club de Boulogne-Billancourt) ngonyaka we-2007.
I-ACBB yayingeyondawo yokufundela nje kuphela, kodwa yayiluphawu lwezemidlalo apho bonke abazali babefuna ukubhalisa abantwana babo. Oku kungenxa yokuba i-academy yayidume ngokuqesha abadlali bayo kwiiklabhu eziphezulu zaseFrance. Hatem Ben Arfa, Yacine Bammou, ukubiza kodwa abambalwa badlula kwiklabhu.
Iinqaku le-Allan Saint-Maximin Ibali lokuKhula kobuntwana kunye ne-Untold Biography Facts - Indlela eya kwigama
Njengoko u-Saint-Maximin wakhula waba kwishumi elivisayo, waqala waphupha ngokudlala kwi Premier League. Emva ngelo xesha, inkwenkwe yaseFransi yayiya kubukela iArsenal Thierry Henry Imini yonke kumabonwakude.
Ukusebenzela ukufikelela kumaphupha akhe, inkwenkwe eselula yaqhubeka nokwenza oko yayihlala ikwenza kakuhle kumdlalo wokudlala- Ukuzibonakalisa ngemidlala yakhe kunye nesantya ngendlela ekhethekileyo. Ecacisa ubunye bakhe phakathi kwababini bakhe, uSaint-Maximin ukhe wathi;
“Kwikholeji, baqeqesha, ukuchukumisa omnye, ukubamba ezimbini. Wonke umntu waphawula ukuba ndikhule ngendlela eyahlukileyo. Ndibethe kakhulu kwaye kwathiwa makudlale ngokuchasene namakhwenkwe amakhulu nabomeleleyo. Ndifundile ukubabetha kwaye kwangaxeshanye, ndakhwelwa ”
Umqeqeshi wakhe ngelo xesha, UGuillaume Sabatier, Wakhe iqela lakhe elijikeleze yena. Kumdlalo wakhe wokuqala wokukhuphisana, uAllan Saint-Maximin wenza umbono ngokufaka amanqaku e-8. Ukuqwalaselwa yinto enkulu ebusheni bakhe, waba negama elikhulu phakathi kwabaqeshi kulo lonke elaseFransi. Kungekudala, uSanta-Maximin uthathe esona sigqibo sikhulu sobomi bakhe bokuzibandakanya ngokujoyina iSaint-Étienne, iklabhu eyamnika indlela ekhuselekileyo yokuphumelela kwisidanga sokuqala se-2013.
At I-Saint-Étienne B, U-Saint-Maximin waba ngomnye wabadlali babo abaqaqambileyo, uphuhliso olwamenza ukuba abe nelizwe lesizwe laseFrance. Ngelishwa, ukuqhubela phambili kwiqela leklabhu ephezulu akubonanga ubuchule beFrance bufumana ixesha elaneleyo lokudlala. Ukufudukela eMonaco akusebenzanga njengoko i-Saint-Maximin ingekhe ibhentshi Bernardo Silva, Anthony Martial kwaye João Moutinho ababekwincopho yamandla abo.
Iinqaku le-Allan Saint-Maximin Ibali lokuKhula kobuntwana kunye ne-Untold Biography Facts - Ukunyuka Kwigama
Ukuhamba kwimali mboleko ukuya Iklabhu yezemidlalo yeBastiais yaba yeyona khosi inokuthenjwa yomgangatho wokusebenza kwe-Saint-Maximin, engakhange ihlawule nje EMVA ukuqiniseka uNice ukuba amtyikitye eMonaco ngehlobo le-2017.
ENice, uSaint-Maximin uqalile ukwenza imitsi, waba ngumdlali ophambili kwiklabhu ephantsi kukaPatrick Viera. Ukusebenza kwakhe kweklabhu kutsala imanejala yeNewcastle United uBruce owayejonge umntu wokuvuyisa abalandeli bakhe, ukubenza bafumane izihlalo zabo.
Amaphupha wePremier-Maximin's Premier League ekugqibeleni enziwe ukuba kunokwenzeka emva kokujoyina iNewcastle kwi-2nd ka-Agasti 2019. Ngokukhawuleza kwi-2019 / 2020 isizini, umdlali webhola ozithandayo ozifake nge-blonde, i-spiky dreadlocks yaqala abalandeli abanomdla. U-Saint-Maximin uzuze iintliziyo zabakhuseli bePremier League ukubaleka ngokukhawuleza.
UAllan Saint-Maximin kwangoko waba ngabalandeli abathandayo kwisizini yakhe yokuqala yeligi yenkulumbuso. Ityala lemifanekiso: DailyMail
Ngalo lonke ixesha uSanta-Maximin wayekunye nebhola, uyazi ukuba uza kwenza ntoni- ukujija, ukujika, ukutyibilika, ukuntywila, ukuntywila ngaphambili kweqela eliphikisayo kunye nokuqhubela phambili ngebhola eqhotyoshelwe ezinyaweni zakhe. Ukumnqanda ngomnye umbandela ngokupheleleyo njengoko kuqatshelwe kwisiqwenga sobungqina bevidiyo engezantsi.
Ukubukela le vidiyo ingentla, uya kuvuma ukuba ngu-Saint-Maximin, ngaphandle kwamathandabuzo, 'UKUJONGA ' Ebhokisini. Yongeza ubuchule bakhe bokubambisa kunye nobuqili (ebumnyameni nasebumnyameni), i-winger enamandla inakho nesixa esikhulu samandla okufuna i-talismanic Apha ngezantsi kukho isiqwenga sobungqina bevidiyo.
Ngexesha lokubhalwa, u-Saint-Maximin ngokungathandabuzekiyo ngowona mdlali ubalulekileyo kwiqela leNewcastle kwaye ungomnye wabadlali abanomdla wokubukela kwiPremier League. Ngaphandle kwamathandabuzo, abalandeli bebhola ngokubanzi basondele ukuba babone umntwana osakhulayo ekhula kwitalente ekumgangatho wehlabathi phambi kwamehlo abo. Bonke abanye, njengoko besithi, yimbali.
Iinqaku le-Allan Saint-Maximin Ibali lokuKhula kobuntwana kunye ne-Untold Biography Facts - Ulwalamano lobomi
Ngokunyuka kwakhe ukuba nodumo, kuyacaca ukuba uninzi lwabalandeli baseNewcastle bamele ukuba bacamngce ukuba uAllan Saint-Maximin ngokwenene utshatile kwaye usahlala nenkosikazi yakhe okanye unentombi yakhe. EWE! Akukho nto iphikayo kwinto yokuba imbonakalo yakhe entle edibene nendlela yakhe yokudlala iya kumbeka kuluhlu lweminqweno ye-wannabe enokwenzeka.
Ngokuka-WTFoot, umFrentshi wayekrokrelwa ukuba wayethandana nentombazana egama linguMargaux ejikeleze i-2015, ngexesha lakhe neklabhu yaseJamani (Hannover 96). Ngokweengxelo, uMargaux (ofanekiselwe ngezantsi) ngoku uyintombazana yakhe yangaphambili.
UAllan Saint-Maximin wayekrokrela ukuba uthandana noMargaux. Ityala lemifanekiso: I-WTFoot
Ngexesha lokubhalwa, u-Allan Saint-Maximin usikelelekile ngeentombi ezimbini ezithandekayo (uLyana noNinhia) azibiza ngokuba ziinkosazana zakhe. Njengoko kuqatshelwe ngezantsi, ii-braids ezinqabileyo kuzo zombini iinwele zeenwele ziyimbonakaliso emsulwa yomfanekiso katata wabo kunye nokufana. Umfanekiso ngakwesobunxele mhle uLyana (ngasekhohlo) kunye noNinhia (ngasekunene) njengoko bezonwabela kamnandi ezonwabisayo zootata babo ababalaseleyo.
Dibana neentombi zika-Allan Saint-Maximin- uLyana kunye noNinhia. Ityala lemifanekiso: TheTimesUK
Iinqaku le-Allan Saint-Maximin Ibali lokuKhula kobuntwana kunye ne-Untold Biography Facts - Ubomi bomntu
Ukwazi uAllan Saint-Maximin uBomi boBuntu kude nayo yonke intshinga kunye nobuqhophololo kwisandi kuya kukunceda ukuba ube nembono engcono ngobuntu bakhe.
Ukuqala, apho Ngokwenyani kubaluleke kakhulu kuye kunezakhono zakhe, iilebheli kunye neelebheli zoyilo. Ewe!, Unokucinga ukuba unombala nje. Kodwa USanta-Maximin ngokwenene ungumntu okrelekrele nomntu oqhelekileyo okwaziyo ukuba wenza ntoni; ukubeka abanye kuqala phambi kwakhe. Ukuthetha ne-BBC, U-Saint-Maximin wenza ukuba umhlaba waziwe ngomnqweno wakhe wokwenza yonke into kwisiphambuka, hlekisa abalandeli, nceda abanye abadlali-ndima nako oko kuthetha ukungafoli amanqaku. Apha ngezantsi kukho isiqwenga sobungqina bevidiyo.
Kwinyanga nje emva kokujoyina iNewcastle, abalandeli base-England North East bathanda iindlela zabo zokuhlonipha imbali yabo kwimbali yenkwenkwe- ukukhula okwazala amantshontsho akhe. U-Saint-Maximin uneculo elidumileyo kwigama lakhe- eliculwa kungekuphela nje ngexesha lomdlalo kodwa kuyo yonke indawo kubandakanya iiklabhu. Mamela apha ngezantsi;
Kubalandeli abaninzi, ukuba nomdlali odlamkileyo kodwa onomdla kodwa njengoSaint-Maximin kwesi sizukulwana yinto entle ukuba ibonwe. Unguye, ngaphandle kwamathandabuzo, ngumntu onokubonakala, ongabazali beNewcastle abafuna abantwana babo babalingise xa bekhulile. U-Saint-Maximin uzuze intlonipho engathethekiyo kubalandeli abancinci abathi uninzi lwabo bamkhumbule umxholo wakhe, ukuyicula ngokungagungqiyo.
Iinqaku le-Allan Saint-Maximin Ibali lokuKhula kobuntwana kunye ne-Untold Biography Facts - Ubomi Bentsapho
Ngexesha lokubhalwa, u-Allan Saint-Maximin uzenzele owakhe usapho usisiqu sakhe kumdlalo webhola. Abazali bakhe benze imigudu enyanisekileyo yokuphepha ingqalelo yeendaba. Ushicilelo lomfazi wakhe, udadewabo kunye namalungu osapho asele efihliwe. Banokuba namaxesha abemnandi kakhulu ebomini babo ngenxa yokuba enye yazo yeyona nto ibalaseleyo. UKurtys ongazange enze ibhola ekhatywayo okwangoku usebenza njengomcebisi ngekhondo lomsebenzi wakhe kumntakwabo omncinci.
U-Saint-Maximin uyonwabela xa amalungu osapho lwakhe enika abasweleyo uncedo. Ubusazi?… Enye yezinto zokuqala awazenzayo ukufika kwakhe eTyneside yayikukuvuma isimemo nakwi-NUFC Fans Food Bank- indawo ebonisa intlupheko ebhudla abantu abaninzi kuMantla Mpuma eNgilane. Imizamo yemidiya yayijolise kakhulu kwiintombi zakhe; ULyana noNinhia ngexesha leminikelo yabo.
Iinqaku le-Allan Saint-Maximin Ibali lokuKhula kobuntwana kunye ne-Untold Biography Facts - yokuPhila
Ukwazi indlela yobomi buka-Allan Saint-Maximin kuya kukunceda ufumane umfanekiso opheleleyo wenqanaba lakhe lokuphila.
Ukufumana imali ngeenxa zonke ze- $ 2,000,000 ngonyaka ngomvuzo weveki nge-X XUMUMX (ngexesha lokubhala) ngokuqinisekileyo kumenza abe ngumdlali webhola osisigidi- uphawu lobomi obutofotofo. Umdlali webhola onesitayile esiqhelileyo unandipha ubomi bokuzonwabisa obonakala ngokulula I-sedan ebumnandi enexabiso elikwi- $ 151,600 (umvuzo wakhe iiveki ezimbini ezinesiqingatha).
Inqwelo ka-Allan Saint-Maximin's
Kwindlela yokuphila, yewe kwaye ndiyazi ukuba i-Saint-Maximin inengqondo entle yefashoni njengoko iqaphelekile kwilizwi lokudlala. I Indoda yaseFransi yimo yefashoni, othanda ukubonakala ubukhazikhazi kokubini nokucoca ubushushu. Njengoko kubonwe kwiminyaka yakhe yobudala, umyili wokunikezela (ngakumbi iibhloko zentloko) iimpahla zakhe bezisisibonakaliso sakhe ukusukela kwiintsuku zakhe zokuqala.
Ubomi buka-Allan Saint-Maximin abuqalanga namhlanje. Ityala lemifanekiso: I-Instagram
Iinqaku le-Allan Saint-Maximin Ibali lokuKhula kobuntwana kunye ne-Untold Biography Facts - Inyaniso engekho
Waxelelwa ukuba agqume i-Headband Designers Sticker: Ubusazi?… Inkwenkwezi entsha yase-Newcastle u-Allan Saint-Maximin waye wanyanzelwa ukuba agubungele intloko yakhe ye- $ 180 ye-Gucci ene-STICKER ngexesha lokuphumelela kweManchester United ukwenzela ukuphepha ukwaphula imithetho yenkxaso-mali. Ngeli xesha ngalo mzuzu, umdlali okhohlisayo kuye kwafuneka abeke isiqwenga somkhombe esimhlophe ngaphezulu kwelogo yeGucci.
UAllan Saint-Maximin unyanzelwe ukuba agubungele i-180 yebhanti yentloko xa edlala ebaleni. Ityala lemifanekiso: Ilanga
I tattoo ka-Allan Saint-Maximin's Fans: ukuba Iiphatho zeS Superhero ayifanelanga fan. Ukufana kuka-Allan Saint-Maximin ukumbone efumana isiseko esikhulu se fan. Abalandeli abanobunzima bokufa ngolu hlobo (ngezantsi) babengenangqondo yokwenza uthando lwabo lwaziwe ngokufumana ngokusisigxina umzobo wobuso emzimbeni wabo.
Yintoni yakhe Indlela yemihla ngemihla ijongeka njengoku: U-Allan Saint-Maximin ngumntu osebenzisa iQhinga lokuSebenza eliSebenzayo ukuze uhlale kwaye unesimo. Ibhola ekhatywayo enobuchule isebenzisa indlela engaqhelekanga yokwenza umsebenzi. U-Saint-Maximin ukhetha ukubuyela umva kunye nenhlanhla kwizitepsi zakhe njengendlela ekhethekileyo yokuzigcina efanelekileyo.
QHUBEKA: Enkosi ngokufunda i-Allan Saint-Maximin Ibuntwaneni Ibali leNqaku le-Untold Biography. Ku- LifeBogger, sizabalazela ukuchaneka kunye nokuthe tye. Ukuba ufumanisa into engakhange ilunge, nceda wabelane nathi ngokuphendula ngezantsi. Siya kuhlala sizixabisa kwaye sihlonipha izimvo zakho.
I-Aleksandar Mitrovic Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts